सबैले भन्थे संभव छैन तर संभव भयो || TOUGH talk with Dil Bhusan Pathak
हरेक बर्ष विद्यालय शिक्षाको खुड्किलो मानिने एसइई परिक्षाको रिजल्ट आउ“दा हाम्रा सामुदायिक विद्यालय कमजोर सूचीमा पर्छन् । सुविधायुक्त विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु उच्च अंक ल्याएर उर्तिण हुन्छन भने तर गरिबी र आर्थिक क्षमता समेत कमजोर परिवारमा हुर्केका र भौतिक पूर्वाधार राम्रँे नभएका विद्यालयका विद्यार्थीहरुको नतिजा टिठ लाग्दो हुनेगर्छ । यसै बर्षको एसइइ परिक्षाको नतिजामा पनि सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयको परिणाम धेरै नै कमजोर छ । एसईई दिने कूल चार लाख ५९ हजार दुई सय ७५ परीक्षार्थीमध्ये तीन लाख २५ हजार तीन सय ३० अर्थात् ७०.८४ प्रतिशत सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयका छन् थिए । जसमा निजी एवं संस्थागत विद्यालयको तर्फबाट २९.१६ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३३ हजार नौ सय ४५ परीक्षार्थीले एसईई दिएका थिए । तर परिणाम हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका करिब १५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र ए प्लस ग्रेड ल्याए । जबकी परिक्षामा सामेल भएका संस्थागत एवं निजी विद्यालयका भने करिब ८४ प्रतिशतले ए प्लस ल्याए । त्यस्तै ए ग्रेड ल्याउने सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी संख्या जम्मा २१ प्रतिशत छ भने निजी एवं संस्थागत विद्यालयका ७८.०६ प्रतिशत छन् । यो तथ्यले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाबीचको ठुलो अन्तर उजागर गर्छ । राज्यका कानूनहरुमा समान शिक्षाका अक्षरहरु सुन्दर ढंगले कुदिएका छन् । तर त्यत्तिका भरमा शिक्षा समान र एउटै गुणस्तरको हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सरकारी बजेट खर्चेरै काम गर्दा पनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल नभइरहेका बेला अहिले एउटा स्वयंसेवी शैक्षिक अभियानले भने निकै आशा जगाएको छ । सात बर्षदेखि चलिरहेको ‘टिच फर नेपाल’ नामको स्वयसेवी शैक्षिक अभियान अन्तर्गत अहिले सात वटा जिल्लाका झण्डै ५ दर्जन सामुदायिक विद्यालयहरुमा करिब डेढ सय स्वयंसेवी शिक्षक परिचालित छन् । यो अभियानका शुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ– शिशिर खनाल । अमेरिकामा अध्ययन सकि श्रीलंकाको सर्वोदय मुभमेन्टमा समेत काम गरी स्वदेश फर्किुन भएका उहा“को अभियान अहिले नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारमा नमुना बन्दै गएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले गरिरहेका पहलहरु कति प्रभावकारी छन् ? टिचफर नेपाल कस्तो स्वयसेवी अभियान हो ? र यो कनि चाहियो ? नेपालका गाउ“हरुमा चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको हालत कस्तो छ ? किन धेरै जसो विद्यार्थी विद्यालय शिक्ष्ाँमै गुल्टिन्छन् ? त्यसमा पनि अंग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता विषयमा विद्यार्थी कनि कम अंक ल्याउ“छन् ? स्वयसेवी शिक्षक तयार पारी उनीहरुलाई गाउ“ गाउ“मा खटाउनका लागि कति चुनौती छ ? र किन आवश्यक छ ? यीनै प्रश्नको जावफ खोज्न आज मसंग हुनुहन्छ ‘टिच फर नेपाल’ का संस्थापक सिइओ शिशिर खनाल ।
सबैले भन्थे संभव छैन तर संभव भयो || TOUGH talk wit...